यसरी फलाउन सकिन्छ माटोबिनै अर्गानिक तरकारी ! (तस्वीरसहित) | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर यसरी फलाउन सकिन्छ माटोबिनै अर्गानिक तरकारी ! (तस्वीरसहित)
on: December 16, 2018 मुख्य खबर, समाचार
यसरी फलाउन सकिन्छ माटोबिनै अर्गानिक तरकारी ! (तस्वीरसहित)
पुस १, रुपन्देही । तरकारीलगायत अन्य अन्नबाली माटोमा रोपेर उब्जिन्छ भन्ने आमधारणा छ । तर, अचेल माटोबिनै तरकारी फलाउन थालिएको छ । स्वाइललेस (माटोबिना) तरकारी खेती रूपन्देहीको तिलोत्तमाका तीन युवाले शुरू गरेका छन् ।
तिलोत्तमा–३ विष्णुपुरामा लुम्बिनी हाइड्रोपोलिक नेपाल नाम कृषि फर्म स्थापना गरी युवा कृषक ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा माटोबिना नैं तरकारी खेती शुरू गरिएको हो । यस प्रकारको खेती नेपालमै पहिलो पटक भएको युवाहरुको दाबी छ । होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययन गरेका पौडेल दश वर्ष अगाडि रोजगारीको सिलसिलामा ओमान पुगेका थिए । त्यहाँ देखेको अनुभवका आधारमा उनले यस्तो प्रविधिबाट तरकारी खेती शुरु गरेका हुन् ।
यो प्रविधिको खेतीमा नरिवलको जट्टा पेलेर÷पिसेर बनाइएको कोकोपिट (मसिनो धुलो) गमलामा राखिन्छ । त्यसमा सार्न योग्य भएको बिरुवा रोपिन्छ । नरिवलको जटा बिरुवा अड्याउनको लागि मात्र राखिने हो । यो तरिकाले खेती गर्दा श्रम शक्ति थोरै लाग्ने, पानी पनि धेरै नलाग्ने पौडेल बताउँछन् । ‘पहिले त मलाई पनि अचम्म लाग्यो’ पौडेल भन्छन्, ‘पछि अलि बुझ्दै गएपछि त्यही प्रविधि अपनाएर सुख्खाग्रस्त(गर्मी) ठाउँमा पनि खेती गर्न सकिने सम्भावना देखेर घरमा आएर यो खेती प्रणाली शुरू गरेको हुँ ।’ उनकाअनुसार यो इजरायली प्रविधि हो । ‘मैले यो विषय पढेको होइन । कुनै प्राविधिक तालिम पनि लिएको छैन । आफैं खोज अनुसन्धानबाट यो खेती गर्दा राम्रो हुने देखेर लागेको हुँ,’ उनले भने ।
यो खेती गर्न प्लाष्टिकको ठूलो (घरजस्तै) आकारको टनेल बनाइन्छ । जहाँ बाहिरको हावादेखि कुनै पनि किरा–फट्याङ्ग्राभित्र जान सक्दैनन् । टनेलभित्र बिरूवा लगाइसकेपछि त्यसलाई हुर्कनका लागि आवश्यक पर्ने पोषक तत्व (एमपिके) र पानी पाइपमार्फत प्रत्येक बिरूवामा पुग्छ । फर्मभित्रको तापक्रम अटोमेटिक सिस्टम छ । तापक्रम बढ्यो भने आफैं पङ्खा चल्छ । घट्यो भने पङ्खा आफैँ बन्द हुन्छ ।
पौडेलसहित यो खेतीमा पिताम्बर आचार्य र पुष्पा आचार्य क्रियाशील छन् । पहिलो चरणमा तीन जना मिलेर झण्डै एक विगाहा जग्गामा व्यवसायिक हाइड्रोपोनिक प्रविधिमा तरकारी खेती उत्पादन शुरू गरिएको हो । अहिलेसम्म एक करोड रूपैयाँ लागानी गरिएको उनीहरु बताउँछन् ।
फर्मका अर्का सञ्चालक पिताम्बर आचार्य भन्छन्, ‘हामीहरू यस्तो खेती गर्न थाल्दा धेरैले टोलमा कसरी सम्भव होला ? भन्थे । तर, अहिले फलेको तरकारी बजारसम्म पु¥याउन थालेपछि सबै दंग परेका छन् ।’ अहिले लुम्बिनी हाइड्रोपोलिक कृषि फर्म हेर्न दैनिक ५० भन्दा बढी कृषकदेखि स्थानीयसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
चार महीनाअघि शुरु गरेको यो प्रविधिको तरकारीले उत्पादन दिन थालेको छ । गोलभेंडा, काँक्रो, भिंडेखुर्सानी, करेला र सागलगायतका एक सिजनको तरकारी फर्मबाट विक्री गरिसकिएको पुष्पाले बताइन् । विषेशगरी विदेशी पर्यटकहरू आउने स्टार होटलहरूले सलादका लागि यस्ता अर्गानिक उत्पादन खोज्ने उनीहरु बताउँछन् ।
यो प्रविधिमा कुनै पनि विषादी प्रयोग हुँदैन । पूर्ण रूपमा अर्गानिक हुन्छ । अहिले पाँच ओटा सेड बनाएर शुरू गरिएको तरकारी खेती आउँदो वर्षदेखि थप विस्तार गरी १० ओटा सेड तयारीमा सञ्चालकहरू पुगेका छन् । उनीहरूले वार्षिक ८० हजार रूपैयाँ तिर्ने गरी जग्गा लिजमा लिएका हुन् । फर्मका लागि आवश्यक तरकारीका विरूवा पनि फर्ममै उत्पादन गरिन्छ ।